Imisebenzi yokhenketho yaseTropical North Queensland engama-3190 izakulahleka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Imisebenzi yokhenketho yaseTropical North Queensland engama-3190 izakulahleka
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Nxibelelana nendalo kwindawo engafaniyo nakwezinye iindawo - ezijikelezwe ngumqaqa kwaye zigutyungelwe lihlathi lemvula, ulwamkelo olufudumeleyo lwehlabathi likulindile.
Lo ngumyalezo kwiwebhusayithi yeBhodi yezoKhenketho yaseTropiki yaseQueensland, ekhuthaza iGreat Barrier Reef kunye neCairns e-Australia.
Eminye imisebenzi yezokhenketho yaseTropical North Queensland e-Australia iyakulahleka ngeKrisimesi inciphisa abasebenzi bezokhenketho ukuya kwisiqingatha sobukhulu bendyikityha yokufa, ngokophando olutsha oluvela kwiQonga lezoKhenketho nezoThutho (TTF).
UMphathi oyiNtloko wezoKhenketho eTropiki North Queensland (TTNQ) u-Mark Olsen uthe ukhenketho luqeshe abasebenzi abali-15,750 abasisigxina nabangesosigxina kwaye, ngenkcitho yezokhenketho engathanga ngqo, baxhasa imisebenzi iyonke engama-25,500 XNUMX phambi kobhubhane kwingingqi yeCairns.
NgoJulayi 2021, siphulukene nabasebenzi abasisigxina abangama-3,600, nditsho ngenkxaso kaJobKeeper kunye nemarike yasekhaya ebuyayo, ”utshilo uMnu Olsen.
“Ingingqi ikhulise abasebenzi kuyo yonke indawo elungiselelwe ubusika obuxakekileyo, kodwa ngoku aba bafundi batsha, kubandakanya abangaphezulu kwama-200 abasuka kwicandelo lezokhenketho, abebeziqeqesheni iinyanga kuxelelwa ukuba bafune omnye umsebenzi.
"Urhulumente kufuneka aqonde ukuba le mpembelelo izakubaluleka kangakanani kuluntu lwethu apho umsebenzi omnye kwabahlanu uxhomekeke kukhenketho."
Usihlalo we-TTNQ uKen Chapman uthe inkxaso yengeniso iyafuneka kubasebenzi bezokhenketho abaphulukana nobomi babo ngoku.
Mamela ingxoxo evela eMantla eQueensland
"Abasebenzi abemi phantsi kwaye baphulukana neeyure zomsebenzi ngenxa yokutshixwa kwengingqi yabo bayakwazi ukufikelela kwi-750 yeedola ngeveki yokuhlawulwa kwentlawulo ye-Covid evela eCentrelink," utshilo.
“Kodwa abasebenzi bezokhenketho beme phantsi kuba ukushiyeka kwezinye iindawo elizweni kubangela ukuba ishishini lomqeshi wabo litshixelwe ngaphandle kubathengi abanakho ukufumana inkxaso mali.
Le yintlekele yabantu ngenxa yomgaqo-nkqubo kaRhulumente. ”
Umphathi weCairns Chamber of Commerce u-Patricia O'Neill uthe ilahleko yemisebenzi ibivakala kuwo onke amashishini, ngakumbi ukuthengisa okuye kwehla kwi-61% yemisebenzi ukusukela kunyaka-mali ophelileyo.
Umphathi we-Advance Cairns uPaul Sparshott uthe amandla oqoqosho lwengingqi anokuphinda ancitshiswe kakhulu ukuba abasebenzi abanezakhono baphulukene necandelo lezokhenketho kunye nokwamkela iindwendwe.
“Kuya kubakho ukufikelela kumgama omde. Xa iimarike zokhenketho zichaphazeleka ngamandla zingena kwamanye amashishini achaphazela uqoqosho lwengingqi iphela, utshilo.
Utshilo uMnu I-Tropical North Queensland is kwaye izakuhlala, yenye yezona ndawo zichaphazelekileyo e-Australia, kwaye imbonakalo yeshishini lokhenketho ibimdaka.
“Ngaphandle kwabathengi, amashishini awanayo ingeniso yokugcina abasebenzi abanezakhono eziphezulu, abanye babo bafumene uqeqesho lweminyaka kwiindawo ezikhethekileyo ukuze babe ngabatyibilikisi, abaqhubi bezantlukwano, kunye nabaxumi abanikezela ngamava okhenketho lommandla.
Ummandla wethu ubeneentsuku nje ezingama-27 ngqo ngaphandle kweempembelelo zokutshixwa kweemarike eziphambili zekhaya kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo.
“Ngelo xesha kwinyanga kaCanzibe yayiyeyona ndawo ixakekileyo eCairns naseGreat Barrier Reef ukususela ngexesha lo bhubhane nanjengoko ingoyena mmandla weGoogled wengingqi oya kubakhenkethi baseAustralia.
“Nangona kunjalo, impawu zokumisa / zokuqalisa zokutshixwa kwamazantsi okuvala indawo ekuyiwa kuyo ngaphandle kweemarike eziphambili kunzima kumashishini ukuze azilawule, ngakumbi kumanqanaba abasebenzi.
“Sikwiveki yethu yesithandathu yeendwendwe eziwa simahla nabantu abangaphezu kwezigidi ezili-15 baseOstreliya.
“Uninzi lwamashishini luqhuba ngaphantsi kwe-5% yengeniso yawo yesiqhelo, kwaye ukubhukisha phambili kuyacotha kwiihotele kuye kufikelela kwi-15-25% yokuhlala kwaye ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeedola kwimicimbi ehlehlisiwe ngoJulayi nango-Agasti.
"Si amaphenyane aphuma kunye nabakhweli abathandathu aAbasebenzi abane kunye neendawo ezininzi zikwiiyure zokurhweba ezinqongopheleyo, ngelixa abanye besiya kubusika.
"Abathengi baphulukene nokuzithemba kwabo kubhukisha iindawo zohambo kude nakumakhaya, phantse iipesenti ezingama-60 zabahambi base-Australia akunakulindeleka ukuba bawele umda wabo kaRhulumente ngokweenkcukacha ezintsha ezivela kwiQueensland Tourism Council Council (QTIC)."
“Njengokuba isiqingatha sohambo lwethu lwasekhaya lusuka phakathi kwelizwe ngaphambi kokuba lutshixiwe, ukuvalwa kwemida kuya kuqhubeka kunefuthe elikhulu kwingingqi yethu.
“Njengokuba kuza iholide zesikolo, umsebenzi wentengiso ye-TTNQ ngoSeptemba nango-Okthobha uyakuxhomekeka kakhulu kumaqabane eearhente zokuhamba ukuzama ukunika abathengi ukuzithemba kokubhukisha besazi ukuba utshintsho luza kuqhubeka ukwenzeka.
"Idatha evela kwiiarhente zohambo zentengiso ibonisa ukuba iCairns iseyindawo yesihlanu ekhangelwe kakhulu kunye neyesithandathu kwezona ndawo zihanjelweyo kwezi veki zine zidlulileyo, kodwa siqhuba ngaphantsi kwe-25% yokukhangela kunye ne-55% yokubhukisha ukusuka apho besikade siqala khona. I-covid."